Focus Beauty | Post
Snail Wish Whitening Cream
New Skiin All In One Tone Up Cream
New Skiin Whitening Selfie Face Mask
Winter Moonlight Custrad Creamy Foundation
Autumn Sunrise Custard Creamy Foundation
Winter Moonlight Sheer Silk Setting Powder
Autumn Sunrise Sheer Silk Setting Powder
Better Skin Tamarind Turmeric Coffee Soap Scrub
Garnier Vitamin C Super Essence
New Skiin Skin Reborn Solution
Tamarind Tumeric Coffee Scrub Soap
Better Skin Soap
Garnier Vit C Super Essence
Thet Best Quality
Nano By Focus Beauty
Your Skin Care BFF
Beaute Cafe By Focus Beauty
New Skiin Facial Foam Cleanser
Vitamin C Foam Cleanser(Moist)
Collagen Foam Cleanser(Moist)
Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue 30 sheets
Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue 100 Sheets
Super Clen Tooth Paste
Aqua Luminous Sleeping Cream
Aqua Luminuous Sleeping Cream
New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion
New Skiin Brightening Exfoliation Toner
Brightening Exfoliation Toner
Ma Thandar Win
🌹ေႏြရာသီမွာ ပူလြန္းလို့ မိတ္ကပ္လိမ္းရမွာေၾကာက္ေနၿပီလား No No No . . .အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ေၾကာက္ေနစရာ မလိုပါဘူးေနာ္ ေအးျမၿပီး လွပမွုကို ေပးစြမ္းနိုင္တဲ့ New Skiin ေလး ရွိပါတယ္ အသားအရည္ကို ျဖဴစင္ဝင္းပၿပီး မွန္ၾကည့္လိုက္တိုင္း စိတ္ေက်နပ္မွုအျပည့္ ရရွိနိုင္တဲ့ New Skiin ေလးရွိတယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္ New Skiin 5g တစ္ထုပ္ 3500ks မွာယူလိုပါက 🌹09783069106 or cb သို့ စိတ္၀င္စားလို့ ကိုယ္စားလွယ္ ၀င္လိုသူမ်ားလဲ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ေနာ္ #ခင္ခင္ႀကီး🌹
Ma Myint Ohnmar Htwe
စမတ်ကျကျလေးဈေးရောင်းဖို့ Focus Beautyနဲ့လက်တွဲကြပါစို့ contact me 👉☎️09402763733
Vitamin C က ဘာ‌တွေကောင်းတာလဲ . . . 🍋Vitamin C က သင့်အ‌ရေပြားဆဲလ် အသစ်ထွက်ရှိခြင်းကို အားပေးပြီး ပျက်စီးနေသော ဆဲလ်များပြုပြင်မှုကို မြန်ဆန်စေပါတယ်. ဓါတ်တိုး ကာကွယ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အသားအရေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ဖျက်စီး ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်. ဒါကြောင့် အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်း ရင့်ရော်ခြင်း တွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်. 🍋ဒါ့အပြင် Vitamin C ရဲ့ နူးညံ့သော အက်ဆစ်အစွမ်းဖြင့် ကိုလာဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို တွန်းအားပေးသောကြောင့် အရေပြားတင်းရင်း လာစေခြင်း၊ အမာရွတ်များတွင် အသားတက်မြန်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာစေပါတယ်. 🍋အရေပြားမှ မယ်လနင်ဓါတ်ထုတ်လုပ်မှုကို တားဆီးပေးသောကြောင့် အသားအရေဖြူ၀င်းစေပြီး တင်းတိမ် မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်. Vitamin C ရဲ့ ‌ကောင်းကျိုး‌တွေ အားလုံးခံစားရရှိဖို့ Garnier Vitamin C Super Essence ကိုလိမ်းကြရအောင်နော် Garnier Vitamin C Super Essence 30 ml တစ်ဘူး ၁၂၀၀၀ ကျပ်. Focus Beauty Agent များထံမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ. #VitaminCSuperEssence
ရာသီဥတုမရွေး စိတ်တိုင်းကျ လှပတဲ့ အသားအရေရရှိဖို့က Snail Wish Whitening Cream တစ်ဘူးပဲလိုတယ် အသားဖြူ၀င်းလာ‌စေမယ် အရေးအကြောင်း သက်သာ‌ပျောက်ကင်းမယ် တင်းတိတ်အမည်းစက်တွေ သက်သာ‌ပျောက်ကင်းမယ် ၀က်ခြံအမာရွတ်တွေ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြည့်တင်းလာမယ် ကြည်လင်၀င်းပပြီး Glow Look ကို ချက်ချင်းရရှိလာ‌စေတယ် Snail Wish Whitening Cream 50g တစ်ဘူး ၂၉၅၀၀ ကျပ် #SnailWishWhiteningCream #TheBestQuality
ဖြူ၀င်းလှပ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်တဲ့ မိတ်ကပ်အလှရရှိဖို့က KSW Beauty ရဲ့ Winter Moonlight ‌‌ပေါင်ဒါ‌အဖြူလေးပဲ လိုပါတယ်. Foundation လိမ်းပြီး Winter Moonlight ‌ပေါင်ဒါအဖြူလေးနဲ့ Setting ချထားလိုက် တစ်နေကုန် အလှပျက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး‌ပေါ့. Winter Moonlight ‌ပေါင်ဒါအဖြူ 30 g တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ်. #KSWBeauty #TheFirstArtistBrand
ရွှေရောင် အသားအရေပိုင်ရှင်တို့အတွက် Autumn Sunrise Sheer Silk Setting Powder . . . တစ်ခါ‌လောက်လိမ်းကြည့်လိုက် တစ်သက်တာ စွဲမက်သွားမယ့် အရည်အသွေးဆိုရင် KSW Beauty လို့သာ မှတ်ထားလိုက်ပါ. မကြီးစန်းရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံနဲ့ Korea နည်းပညာ‌ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး Artist Brand ပေါင်ဒါအ၀ါ 30g တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ်. Focus Beauty Agent များထံမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ. #KSWBeauty #TheFirstArtistBrand
မြန်မာပြည် အသားအရေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင် မကြီးစန်းကိုယ်တိုင် တီထွင်ဖော်စပ်ထားတဲ့ KSW Beauty Custard Creamy Foundation. Professional Makeup Artist တစ်ယောက်လိမ်း‌ပေးလိုက်သလို လှပတဲ့ မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်ကို ကိုယ်တိုင်လိမ်းခြယ်နိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထား‌ပေးပါတယ်. မိတ်ကပ်လိမ်းတိုင်း ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် လှပနေစေဖို့ KSW Beauty ရဲ့ Custard Creamy Foundation. 35ml တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ်. #KSWBeauty #TheFirstArtistBrand
မိတ်ကပ်ကို တစ်နေကုန်လှပနေစေမယ့် KSW Beauty ရဲ့ Sheer Silk Setting Powder. မသုံးဖူး‌သေးရင် သုံးကြည့်လိုက် တစ်ခါမှ မရဖူးတဲ့ အလှတရားကို ‌လက်တွေ့ သိရှိသွားလိမ့်မယ်. Sheer Silk Setting Powder 30g တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ်. #KSWBeauty #TheFirstArtistBrand
လက်နဲ့ချေးတွန်း‌နေတုန်းလား . . . လက်သည်းထဲမှာ အသားအရေကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ပိုးမွား‌တွေ ပါ၀င်နေနိုင်ပါတယ်. ဒါ‌ကြောင့် လက်နဲ့ ‌ချေးတွန်းမယ့်အစား Nano Brush ‌လေး သုံးကြည့်လိုက်ရအောင် . . . Nano Brush ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ Silicon က ဘက်တီးရီးယားနှင့် မှိုများ အပေါက်ပွား‌အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာ‌ကြောင့် သင့်အရေပြားကို စိတ်ချစွာ သန့်စင်နိုင်ပြီပေါ့ Nano Brush တစ်ခု ၁၂၀၀၀ ကျပ် #NanoByFocusBeauty #YourSkinCareBFF
အသားအရေ လှပကျန်းမာ‌နေဖို့က ‌ရေဓါတ်ပြည့်၀‌နေဖို့ လိုပါတယ် Nano Spray က Nano နည်းပညာနဲ့ ‌ရေကို အသေးငယ်ဆုံး အရွယ်အစားအထိ ဖြိုခွင်းထုတ်လုပ်ပေးလို့ သင့်အရေပြားကို ‌ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းရာမှာ အထိရောက်ဆုံး ‌ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်. ဘယ်အချိန်တွေမှာ အသုံးပြုသင့်တာလဲ . . . ၁. ‌‌Skin Care သုံးပြီးချိန်မှာ Nano Spray သုံး‌ပေးခြင်းအားဖြင့် Skin Care ရဲ့ ထိရောက်မှုကို ၂ ဆ တိုးလာ‌စေပါတယ်. ၂. မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးချိန်မှာလည်း Setting Spray အနေနဲ့ အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်. ၃. တစ်နေကုန် မိတ်ကပ်လိမ်းထားလို့ Retouch လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာလည်း Nano Spray ‌လေးသုံးပြီး Makeup Retouch လုပ်ခြင်းက ပိုပြီး သဘာ၀ကျကျလှပတဲ့ မိတ်ကပ်အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေပါတယ်. Nano Spray တစ်ခု ၁၇၀၀၀ ကျပ်. #NanoByFocusBeauty #YourSkinCareBFF
First Page « 188 189 » Last Page
© 2020 Focus Beauty. All rights reserved | Designed by Xan IT Solutions